Chelsea Oo Musiibo Dhaawacyo Ahi Ku Habsadeen Qaybta Hore Ee Kulanka Malmo - Laacib
HomeWararka CiyaarahaChelsea Oo Musiibo Dhaawacyo Ahi Ku Habsadeen Qaybta Hore Ee Kulanka Malmo
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayay jug weyni soo gaadhay qaybta hore ee kulanka FC Malmo ee tartanka Champions League oo ay laba gool la hormareen 21kii daqiiqadood ee ugu horreeyey.
Thomas Tuchel ayaa lagu qasbay inuu laba beddel sameeyo qaybta hore ee ciyaarta isagoo saaray weeraryahannada Romelu Lukaku iyo Timo Werner oo ay soo gaadheen dhaawacyo ay ciyaarta sii wadan kari waayeen.
Weeraryahanka reer Begium ee Lukaku ayaa la saaray daqiiqaddii 23aad kaddib taakal adag oo lagu qabtay, waxaana muddo kooban oo garoonka dhexdiisa lagula tacaalay xaaladdiisa uu Tuchel ku qasbanaaday inuu beddelo, iyadoo booskiisana la keenay Kai Havertz.
Iyadoo uu Tuchel madax xanuun ka qaaday dhaawaca Lukaku ayaa waxa haddana usoo yeedhay war kale oo aad u xun oo qasbay inuu beddel kale sameeyo, waxaana laba daqiiqaddii 44aad uu garoonka ka saaray Timo Werner oo isagana dhaawac soo gaadhay. Callum Hodson-Odoi ayaa beddelay Timo Werner.
Ka sokow dhaawacyada, Chelsea ayaa heshay guul weyn oo ay ku xaqiijisteen inay yeeshaan lix dhibcood saddex kulan oo ay ciyaareen kaddib.